ဘယ်လို Join ရမလဲ?
Join မယ်ဆိုလျှင် ကျွနု်ပ်တို့ ဝဘ်ဆိုက်ကိုဝင်ပြီး JOIN US ကို နှိပ်ပြီး မှတ်ပုံတင်ပေးပါ။
မှတ်ပုံတင်ထားသော အီးမေးလ်လိပ်စာမေ့နေလျှင် မည်သို့ Login ပြုလုပ်ရမလဲ?
သင့်အကောင့် အသုံးပြုမရခြင်း၊ မေ့လျော့ခြင်းဖြစ်ပေါ်နေလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှု (Customer Service) သို့ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပြီး အကောင့် ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါတယ်။
ကစားဖို့ မိမိနှင့် သင့်လျော်ရဲ့လား?
သင်တည်ရှိနေသော နေရာဒေသ၏ အစိုးရဥပဒေက ခွင့်ပြုထားသော တရားဝင်အသိအမှတ်ပြု အရွယ်ကျော်လွန်ပြီး ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အရေးကြီးသည်မှာ အသက်(၁၈)နှစ် ပြည့်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
ထို့အပြင် ကစားသူသည် မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်အမည်နှင့် ပိုင်ဆိုင်ထားသော မှန်ကန်သည့် ငွေပေးချေမှု စနစ်တစ်ခုလည်း ရှိရပါမည်။
MMOnline365 တွင် ကစားမည့်သူသည် မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်အမည်နှင့် အမှန်တစ်ကယ် ပိုင်ဆိုင်ထားသော စစ်မှန်သည့် ဘဏ်အကောင့် တစ်ခုလိုအပ်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို ကျွနု်ပ်တို့၏ သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
မိမိရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို မည်ကဲ့သို့ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲနိုင်မလဲ?
ကျွန်ုပ်တို့ဝဘ်ဆိုက်ထဲကို Login ပြုလုပ်လိုက်လျှင် “ My Account” ဆိုသည့်နေရာလေးရှိပါတယ်။ ထိုနေရာမှတစ်ဆင့် သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက် အပြည့်အစုံကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ဘဏ်အကောင့် အချက်အလက်များ၊ မှတ်ပုံတင်အမည်များ ပြောင်းလိုလျှင် ကျွနု်ပ်တို့၏ သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုသို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
MMOnline365 တွင် ကစားသူတိုင်း ငွေသွင်းနိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အဓိကအသုံးများသော ဘဏ်များနှင့် ချိန်ဆက်ကာ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်။ ငွေထုတ်ခြင်းကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ အွန်လိုင်းဝင်ပေါက်မှဖြစ်ဖြစ်၊ သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုထံ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးဖြစ်ဖြစ် ငွေထုတ်ခြင်း တောင်းခံနိုင်ပါသည်။
ငွေထုတ်ခြင်းကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ အွန်လိုင်းဝင်ပေါက်မှဖြစ်ဖြစ်၊ သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုထံ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးဖြစ်ဖြစ် ငွေထုတ်ခြင်း တောင်းခံနိုင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ ငွေထုတ်ခြင်းတောင်းခံမှုကို (၁၀)မိနစ်မှ (၁)ရက် အတွင်း ဘဏ်အသုံးပြုလို့ ရရှိခြင်း မရရှိခြင်း နှင့် နေ့စဉ်ပမာဏ ကန့်သတ်ခြင်းတို့အပေါ် အခြေခံပြီး ငွေထုတ်ခြင်းကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။
လောင်းကြေး အနည်းဆုံးနှင့် အများဆုံး ပမာဏတွေက ဘယ်လိုလည်း?
လောင်းကြေးပမာဏသည် ကစားသည့်ဂိမ်းအမျိုးအစားအပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ဂိမ်းတစ်ခုခြင်းစီ၏ လောင်းကြေးပမာဏများကို သိလိုလျှင် ဂိမ်းတိုင်း၏ “ Help” ဆိုသည့်နေရာမှ မိမိကစားမည့်ဂိမ်း၏ လောင်းကြေးအချက်အလက်များ၊ ငွေလျော်မည့်ပမာဏများ၊ အနိုင်ရရှိသည့် လိုင်းများ နှင့် ဂိမ်းစည်းကမ်းများကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိ မိမိကိုယ်ရေးအချက်အလက်များက လုံခြုံမှုရှိရဲ့လား?
MMOnline365 သည် နောက်ဆုံးပေါ် ကုဒ်ဖြေနည်းစနစ်နှင့် ကာကွယ်ခြင်းစနစ်တို့ကို အသုံးပြုထားပြီး၊ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို လုံခြုံစွာ အကာအကွယ်ပေးထားပါသည်။ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ လုံခြုံမှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အရေးကြီးပြီး ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်ချက်အဖြစ် တင်းကြပ်စွာ သိမ်းဆည်းပေးထားပါတယ်။
အကူအညီလိုတဲ့အခါ သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်လိုဆက်သွယ်နိုင်မလဲ?
ကျွန်ုပ်တို့၏ သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းကို LiveChat, Viber, Whatsapp အစရှိသည်တို့မှ ဆက်သွယ်နိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ဝဘ်ဆိုက်၏ “ Contact Us” စာမျက်နှာမှတစ်ဆင့် အခြားသော နည်းလမ်းများနှင့်လည်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။